Zvigadzirwa Mharidzo Nzira nhatu dzechinyakare dzekubatanidza mapaipi esimbi.
Zvigadzirwa Mharidzo Nzira nhatu dzechinyakare dzekubatanidza mapaipi esimbi, ekuti Welding, flange kubatana uye sikuruu yekubatanidza.
CNG yakatemerwa mapaipi sisitimu inoshandisa iyo yakaunganidzwa coupling & bazi rekuburitsa fittings sekiyi, inowedzerwa neakasiyana asiri-gasket pombi fittings.in kuitira kusangana nezvinodiwa zvevatengi, CNG zvakare inogadzira yakawedzerwa zvigadzirwa senge grooved end mavharuvhu, mafirita, nezvimwe .CNG icharamba ichivandudza nekugadzirisa kuitira kuti chigadzirwa chekambani chikwanise kuzadzikisa zvido mukuvakwa kwevanhu, matunhu nemasevhisi.
CNG groove piping system ndeyeyese, yehupfumi, yakachengeteka uye inoshanda pombi system zvikamu, iyo yekumisikidza maitiro haizounze chero kusvibiswa kune iyo pombi.
CNG groove pombi system inovaka pombi kubatana pane yekunze nzvimbo yesimbi pombi.Mukati dhayamita & yemukati pombi haina nyaya yekubatana, izvo zvinoita kuti huwandu hweshandiso hweichi chigadzirwa chinofanirwa kuwedzerwa.
CNG yakatemerwa mapaipi sisitimu inovhara anotevera mapoka:
Grooved couplings akagadzirwa senge chindori chega-chega chekubatanidza chinongedzo, yemukati kiyi nzvimbo yeimba inobata mumapombi mapaipi ekupa pombi yekubatanidza.
inoumbwa pakati pepombi inoguma kubvumira axial kutamiswa uye lateral deflection.Rigid coupling inokiya mapaipi zvakananga pasina kutsauka.
Dzimba dzebazi dzinoburitsa fittings dzine zvikamu zviviri zvakasiyana, zvichiteerana, imba yekuburitsa uye chivharo: Iwo mekutengesa zvitoro anogona kuve akaumbwa maviri ekuburitsa dzimba (akadaro muchinjikwa muchinjikwa), kana imwe nzira yekuburitsa imba pamwe nekavha imwe (inonzi seyemuchina tee) Imba yekuburitsa yakagadzirirwa seyako-yekumisikidza chimiro, kuvaka bazi rekuburitsa pane huru pombi kumhanya.
Grooved Isina-Gasket Fittings
Grooved fittings ane akasiyana masitayera, kupa kuyerera nzira kutendeuka, dhayamita kudzikisira, branching uye rimwe basa.